Inkabadan 2,000 oo xoolo ah oo ku dhintay abaaraha ka jira gob... | Universal Somali TV
Inkabadan 2,000 oo xoolo ah oo ku dhintay abaaraha ka jira gobolka waqooyi Bari Kenya
Ugu yaraan 2,000 oo neef oo xoolo ah ayaa ku dhintay abaaraha baahsan ee ka jira ismaamul goboleedka Mandera ee gobolka waqooyi Bari Kenya oo soomaalida Degto.
Waaxda qaran ee maareynta masiibooyinka Kenya ee loo yaqaan (NMDA), ayaa diiwan galisay dhimashada 371 neef oo Lo, ah , 893 Ido ah, 755 oo Ari ah iyo 68 neef oo geel ah ay ku dhinteen abaarta ka taagan Mandera.
Agaasimaha guud ee waaxda maareynta masiibooyinka ee ismaamulka Mandera Xuseen Maxamed Cali oo qadka taleefanka kula hadlay Universal Tv ayaa sheegay in roobkii la filayay bilihii April iyo May aysan sanadkan ka hoorin waqooyi Bari.
Mr Maxamed ayaa dhanka kale tilmaamay in bishii hore rajadii laga lahaa roobka in uu curto aysan dhicin taasi oo uga sii dartay abaaraha ka taagan ismaamulka Mandera.
Walaaca laga qabo abaaraha ka taagan gobolka soomaalida ee waqooyi bari Kenya ayaa ka sii daraya taasi oo dhalisay in xoola dhaqatada ay qaarkood u soo hayaamaan gudaha dalka gaar ahaan deegaanada Jubbooyinka.
Kan-xigaWHO oo sheegtay in ay korortay dadka ...
Kan-horeRa&#039;isul Wasaare Kheyre oo sheega...
50,400,700 unique visits